Home Wararka MW Farmaajo iyo RW Kheyre oo lacag kala baxay Bangiga Dhexe
MW Farmaajo iyo RW Kheyre oo lacag kala baxay Bangiga Dhexe
Sida ilo wareedyo ku sugan Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ay u xaqiijiyeen MOL. Waxaa saacadan oo habeen ah soo gaaray xarunta Bangiga Dhexe MW. Farmaajo oo RW. Kheyre oo wada socda waxayna kala baxeeen qasnadda Bangiga lacag dhan $15 Mliyan oo doolar.
kulan dheer oo albaabada u xirnaayen oo ay wada galeen MW. Farmaajo & RW Kheyre ayaa ugu danbeyntii waxaa la go’aamiyay in si degdeg ah mooshin looga keeno Gud. Baarlabaanka Maxamed Mursal kaddib markii uu ka horyimid qorshihii ay wateen Kheyre, Fahad & Farmaajo wuxuuna laaley go’aankii uu soo saaray Gud. KX Muudeey ee lagu kala diray guddiga maaliyadda ee BJFS.
Xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa faraha kasii baxeyso kaddib markii ay bilaabeen madaxda sare in ay si ula kac ah ugu tuntaan sharciga boobaan hantida qaranka, ciddi ka hadashana ay dagaal toos ku qaadaan.
Faahfaahin buuxda goor dhow naga filo
Previous articleYaa soo saaray muuqaalka looga been abuuray Xil. Cabdullaahi Maxamed Nuur? (Xog)
Next articleFarmaajo oo caawa afka furtay: “Eelaay” miyaa hadda damacday in ay na horistaagto”.
Xaruumihii cibaadada ee dalka Sacuudiga oo gabi ahaanba la xiray
Baaqashada doorashada Galmudug & siyaasada xirfadaysan ee MW Xaaf (Xog